भुल्केका ८ जना कोरोना संक्रमित औषधि नखाई निको भए – जुगल टाईम्स
भुल्केका ८ जना कोरोना संक्रमित औषधि नखाई निको भए
Posted on २५ बैशाख २०७७, बिहीबार २०:२० Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
विराटनगरको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत उदयपुरको भुल्केका थप आठ जना संक्रमितहरु निको भएका छन। गत सोमबारदेखि लगातार तीनपटक गरेको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले उनीहरुलाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिने भएको छ।
गत बुधबार उक्त अस्पतालमा उपचाररत ६ जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका थिए। अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका थप आठ जना कोरोनामुक्त पुष्टि भएकोले शुक्रबार डिस्चार्ज गरिने प्रदेश एकका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिए।
कोशी अस्पतालमा उपचाररत भारतीय जमाती एक जना, विराटनगर १७ का दुई जना र एक महिलासहित भुल्केका स्थानीय पाँच जनाले कारोनालाई परास्त गरेका हुन। उनीहरुमा वैशाख ८, ९ र १० गते संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचार केन्द्रमा ल्याइएको थियो।
अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको भएपनि उनीहरु कसैलाई पनि औषधि भने दिन नपरेको अस्पतालले जनाएको छ। चिकित्स्कीय निगरानीमा रहेका उनीहरुले आफ्नै रोग प्रतिरोध क्षमताले कोरोना परास्त गरेका हुन।
अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका भुल्केका बाँकी सात जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमित देखिएका उदयपुरका २८, झापाका दुई र भोजपुरका एक जना अस्पतालमा राखिएको थियो।
उनीहरुमध्ये ६ जना डिस्चार्ज भइसकेको र आठ जना शुक्रबार डिस्चार्ज भएपछि बाँकी १७ जना रहने भएका छन। उनीहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रले जानकारी दिइन्‌।
अस्पतालमा रहेकाहरुलाई कोरोनाको लक्षणसमेत देखिएको छैन। अस्पतालबाट कोरोनामुक्त भएकाहरुलाई केही समय क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ। यसअघि डिस्चार्ज भएका ६ जनालाई विराटनगरस्थित रानी मरकजमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
प्रदेश एक मा पिसिआरबाट हालसम्म एक हजार सात सय ८९ जनाको कोरोनाा परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै आरडिटिबाट ६ हजार आठ सय ३१ जनाको परीक्षण भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना सूचना डेस्कले जानकारी दिएको छ।
Posted on ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:२७ Author जुगल टाईम्स
पुस्तकका लेखक नरेन्द्र पनेरुको यस्तो छ भनाई कक्षा ८ को अङ्ग्रेजी किताबमा लिम्पयाधुरासहितको प्रकाशित नक्सा अहिले समाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा किताबमै प्रकाशित हुँदा पनि सरकारले प्रकाशन गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका थिए । कतिपयले त्यसलाई पञ्चायतकालीन किताबमा समेत नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भएको नक्सा प्रकाशन गरेको तर अहिलेको सरकारले त्यति […]
धरानको एडिवी खानेपानी आयोजना असफल भएको पुष्टि
Posted on ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०७:५९ Author जुगल टाईम्स
संस्थानले नै खानेपानी जिम्मेवारी लिनुपर्नेः गोले धरान, ४ जेठः धरान खानेपानी आयोजना असफल भएको एडिवीवाटै पुष्टि भएको आयोजना अनुगमन समितिका संयोजक एवम् सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेले बताएका छन् । उनले एडिवी नेपाल रेजिडेन्ट मिसनका कन्ट्री डाइरेक्टरद्धारा च.नंं II/861/2851/12/19, मिति २० डिसेम्बर २०१९ र च.नंं II/863/2851/12/19, मिति २७ डिसेम्बर २०१९ […]
एनटिभी र रेडियो नेपालमा क–कसको हुँदैछ नियुक्ति ?
बजेट अधिवेशनभरि सांसद एउटै सिटमा बस्ने, दर्शक दीर्घा खाली रहने